Soo dejisan Evernote 7.1.4 – Android – Vessoft
AndroidXafiiskaQoraalada iyo JadwalkaEvernote
Evernote – software ah si ay u abuuraan notes kala duwan ama liiska hawsha. Software The kuu ogolaanayaa inaad si loo badbaadiyo qoraalka, qoraalada lagu qoray ama codka oo ku darto photos, jadwalka ama kala duwan dhawaaqay iyaga. Evernote awood u soo dirto fariin u abuuray by cinwaanka e-mail ee la xiriira addressee in chat lifaaqan qoraalada. Software wuxuu taageeraa .Wadashaqayntaas automatic ah diiwaanka ka server in siisaa inay helaan macluumaadka ku kaydsan ka qalab kala duwan. Evernote sidoo kale jira waxyaabo badan oo qalabka ay u Customize software ee baahida user ka.
Waxay abuurtaa diiwaanka iyo liiska hawsha
Waxay abuurtaa qoraalada lagu qoray iyo cod
Kartida aad u helaan guud
Soo diro diiwaanka by e-mail
.Wadashaqayntaas Automatic ah diiwaanka